Real Madrid ayaa ka mid ah kooxaha lala xiriirinayo u dhaqaaqista David Alaba, kaasoo si bilaash ah kaga tagi doono Bayern Munich dhamaadka xilli ciyaareedkan ka dib markii uu diiday inuu qandaraaska u kordhiyo.
Kooxda reer Spain ayaa horay loola xiriirinayay David Alaba, inkasta oo uu dhawaan diiday inuu ku dhawaaqo iscasilaadiisa.
Xiddiga kooxda Bayern Munich ee Toni Kroos ayaa la waydiiyay hadii uu dib ugu midoobi doono garoonka Santiago Bernabeu kadib 7 sano oo uu fasax ahaa.
Kubadsameeyaha reer Jarmal Kroos ayaa yimid Real Madrid sanadii 2014 isagoo la qaaday guulo xiriir ah Champions League, laakiin Alaba ayaa sidoo kale qeyb ka ahaa safka koowaad ee Bayern Munich tan iyo markaas, isagoo ka soo tagay kooxda dhalinyarada xilli hore.
Toni Kroos oo dhexda uga jira wararka ku saabsan la soo wareegitaankii Alaba ee xagaaga, Toni Kroos ayaa la weydiiyay haddii laacibka reer Austria uu imaan doono Madrid iyo waxa uu ku dari karo: “Haddii Bayern Munich ay tahay laacib kooxda koowaad ah, waxaa hubaal ah inuu la imaan doono tayada uu ugu ciyaari karo Real Madrid sidoo kale.
“Dhibaatadu waxay tahay inaanan wada ciyaarin toddobo sano. Way igu adag tahay inaan ogaado waxa uu ku fikirayo (halka uu doonayo inuu aado). “
Real Madrid ayaa dooneysa Alaba inay ku xoojiso daafaceeda Sergio Ramos iyo Raphael Varane.